के सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि सेक्स आवश्यकनै हो ? - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeस्वास्थ्यके सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि सेक्स आवश्यकनै हो ?
के सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि सेक्स आवश्यकनै हो ?
काठमाडौँ । हुन सक्छ तपाईंको सम्बन्धमा यौनसम्पर्क पहिलो प्राथमिकतामा छैन तर कुनै पनि पाटर्नरबीचको सम्बनधमा सेक्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । कयौ जोडीबीच यौनसम्पर्कका लागि अनुकुलता नहुँदा सम्बन्ध टुट्ने पनि गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाउने गर्दछन् । यहाँ दुई पाटर्नरका बीच सेक्सका लागि कति अनुकुलता मिलिरहेको छ यसबारेमा थाहा पाउने केही संकेतहरुका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
सेक्सको विषयलाई लिएर कुनै पनि प्रकारको तुलना गर्नु हुदै हुन्न । पाटर्नर मध्ये कोही एक पनि सेक्सको तुलना आफ्ना बितेको कुनै सम्बन्ध वा व्यक्तिसँग गरिरहन्छ भने त्यसले वर्तमान समयको सेक्स लाइफ बर्बवाद गरिदिन सक्छ । बीबीसी
Previous articleकाठमाडौंबाट ११ जना अफगानी ‘शरणार्थी’ नियन्त्रणमा
Next articleशंकास्पद मृत्यु भएकी युवतीको झुण्डिएर मृत्यु भएको पुष्टि